Ihe 1,500! Na Social Media ationchị! | Martech Zone
M na-eji Ngwaọrụ Wayback Internet Archive n'abalị a iji gbalịa mata mgbe m eze malitere ịde blọgụ. Adị m oge mbubreyo ma e jiri ya tụnyere ndị na-ede blọgụ ndị malitere blọgụ mgbe a ka na-akpọ ya ode akwụkwọ.
My mbụ ịde blọgụ mere na Ahịhịa ya na ndi otu akwukwo ahia ahia akwukwo (amaghi m na Ryze enwego nkwalite kemgbe 2005!). M gafere gawa Blogger wee malite ide ihe Doug si ihe.
The akpa blog post na m kwadoro WordPress blog bụ maka Mountain Dew na-akpọsa onwe ya dịka nri ụtụtụ na-eburu m. Mgbasa ozi ahụ kwesịrị ịkwali onye ọ bụla ịmalite blọọgụ!
Ka m na-eleghachi anya na ndị na-ede blọgụ maka ọma n'elu a afọ iri, ọ dị ịtụnanya na enwetarala m stats ndị m nwere na saịtị a n'oge ndụ ya:
Martech Zone bụ mgbe niile n'elu blọọgụ 5,000 kacha na Teknụzụ.
Martech Zone bụ na Ike 150 maka Blog blọgụ na weebụ.
Martech Zone na-aga n'ihu na ebe nrụọrụ weebụ 100,000 kachasị elu kwa Alexa.
Ihe karịrị ndị 400,000 bịara na blọgụ m.
Ihe karịrị 40% nke ndị ọbịa ọhụrụ m si ebe a Google.
M ga-aga n'ihu na-akụziri ndị folks etu esi arụ ọrụ, tinye ọnụ, ma nweta mbọ nke teknụzụ ahịa ha site na obere mbọ.
Tags: doug si rantole na ole blog postsna mmetụta na akpaakamgbasa ozi mgbasa oziwayback igwe
Na 2009 Email Marketing benchmark Guide